Xog: Afhayeenka Alshabaab oo lagu dilay Hawlgal ay iska kaashadeen Ciidamadda Maraykanka iyo Kuwa Somalia. – Hornafrik Media Network
Xildhibaan sheegay in Ergadii soo dooratay u yeereen Al-Shabaab
Abiy Ahmed oo xoojiyay dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya
Guddoomiye Yariisow “Xildhibaanada maanta hadlay waa qaswadayaal aan waxba laga…
Sawirro:-Dukumiintiyo Been Abuur Ah Iyo Qalab Oo Lagu Soo Bandhigay Muqdisho
Xog: Afhayeenka Alshabaab oo lagu dilay Hawlgal ay iska kaashadeen Ciidamadda Maraykanka iyo Kuwa Somalia.
By HornAfrik	 Last updated Jul 29, 2017
Mogadishu, Somalia(Hornafrik) — Xog laga helay Sirdoonadda Maraykanka iyo Somalia ayaa muujinaysa in la dilayo Afhayeenkii Kooxda Alshabaab, Cali Maxamud Raage oo loo yaqaanay Cali Dheere. Waxaana Hawlgalka lagu dilay oo ay iska kaashadeen Maraykanka iyo Kumaandoosta Somalia uu ka dhacay Subaxnimadii Khamiista Deegaanka Kuunya Baroow oo Koonfur ka xiga Magaalo Xeebeedka Baraawe ee Gobalka Shabeeladda Hoose. iyadoona Weerarkan lala beegsaday Saldhiga ugu wayn ee Koonfurta Somalia ay ku leeyihiin Kooxda Alshabaab, halkaasoo Ciidamadda Wada Jirka ah ay kaga soo daateen Diyaarado.
Hawlgalkan intii uu socday waxaa lagu dilayo Saraakiil muhiim u ahaa Kooxda Alshabaab oo ay ku jiraan Afhayeenka Kooxda, Cali Dheere iyo Ku Xigeenka Amniyaadka Guud ee Kooxda.
Ma Jiro wax war ah oo arrintan ay ka soo saartay Kooxda Alshabaab, marka laga reebo Xogta ay Hornafrik ka heshay Sirdoonadda Maraykanka iyo Somalia. Sidoo kale Dawladaha Somalia iyo Maraykanka si rasmiya uguma dhawaaqin arrintan.
Hornafrik waxay weerarkan kadib xiriiro la samaysay Dadka Deegaanka oo u sheegay in ugu yaraan ay maqlaan wax u muuqday 2 Gantaal, kadibna ay halkaasi ka billaabatay Rasaas ay 2 dhinac is dhaafsanayeen.
Saraakiil Ciidan oo la socday Hawlgalkana waxay sheegeen in iska caabin yar ay la kulmaan Ciidanku, kadibna ay toogteen kuwii isku dayay inay iska caabinta sameeyaan. Waxayna Saraakiishan intaa ku dareen in Hawlgalkan lagu dilay Afhayeenka Kooxda Alshabaab, Cali Dheere, Ku Xigeenka Amniyaadka Kooxda, 5 ka tirsan Horjoogayaasha Ajaaniibta ee Kooxda, iyo Maleeshiyaad isugu jiray Soomaali iyo Kenyan, kuwaasoo loo tababarayay inay rabshado ka gaystaan Gudaha Kenya.
intii uu Hawlgalkan socday waxay Ciidamaddu soo furteen Maxaabiis Shacab ah oo u xirnaa Kooxda Alshabaab, kuwaas oo qaarkood ay ku naafoobeen Xabsiga sidii loo garaacayay. Waxaana Maxaabiistan intii socon kartay ay Ciidanku u sheegeen inay Guryahooda kala aadaan, halka kuwii naafoobayna loo soo gudbiyay Baraawe.
Saldhigan la weeraray waa kan ugu wayn ee Koonfurta Somalia ay ku leeyihiin Kooxda Alshabaab. Waxaana ku dhex yaalay Mucazkar wayn oo ay ku tababaraan Maleeshiyaadka, Xabsi Dadka lagu ciqaabo, iyo Guryo ay daganaayeen Horjoogayaasha Alshabaab, Xafiiska ugu wayn ee Garabka Warfaafinta Kooxda Alshabaab.
W.Q: Cismad Cali Iidle
Xuquuqda Warkan waxa uu ku gaar yahay Hornafrik
Baarlamaanka Somalia oo ku baaqay in Dawladdu ay dib u eegis ku samayso Go’aankeedii Arrimaha Khaliifka. Akhriso Qoraal Rasmiya oo ka soo baxay Guddiyada Baarlamaanka
Xog: Raiisul Wasaare Khayre oo la filayo inuu dhawaan isku shaandhayn ku sameeyo Golaha Wasiiradda.
Al-shabab executed five men for foreign spy allegations
HornAfrik	 Jul 4, 2019 0
Week of Independence celebrations kicks off in Somalia
Uganda Police Assess Personnel Ahead of Deployment in Somalia
Legendary Somali playwright and musician Sangub dies in Ethiopia
Uganda Police Assess Personnel Ahead of Deployment in…
Legendary Somali playwright and musician Sangub dies in…